About Crush The DAT - Burburin DAT The 2021
Isku dayida lagu ogaanayo sida in aad hesho dugsiga ilkaha waa hawl aad u walaac badan iyo waqti. Waxaan xusuustaa baadi goobo oo ka yaabsado internetka saacado mar uun isku dayaya in ay ku ogaado waxa aan u malaynayaa in ay sameeyaan soo socda ama haddii aan xitaa wadada saxda ah.
Burburin DAT la abuuray si uu idiin badbaadiyo waqtiga iyo tamarta iyadoo la siinayo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan dugsiga ilkaha ee ka mid ah website fudud.
Magacaygu waa Kip oo aniguna waxaan ahay dhakhtarka ilkaha iyo qalin dhawaan dugsiga ilkaha. Waxaan ahaa in la aqbalo mid ka mid ah hogaanka saddex dugsi ilkaha waxaan codsatay in aan isku day ugu horeysay galo wuu kari waayay.
nasiib wanaag, Waxaan lahaa oo kaliya in ay qaataan DAT mar. Anigu ma aan valedictorian ee dugsiga sare, umana aan sharaf Summa Jochen Laude qalin jabiyaan markii aan helay Bachelor of Science ee ku degree Biology. Si kastaba ha ahaatee, Aan ku sameeyey hadaf leedahay in aad hesho dugsiga ilkaha oo ahaa awoodaan si ay u dhacaan iyada oo aan shaqo adag iyo rabitaankiisa ilkaha.
Waxaan doonayaa in ay isticmaalaan waayo-aragnimada iyo aqoonta aan helay halka ay marayaan habka gelitaanka dugsiga ilkaha iyo dugsiga ilkaha si loo caawiyo dadka kale la mid ah sameeyo. Hadafkeygu waa in ay bixiyaan macluumaad cad oo xeeldheer si aad si fiican u dhalin karaa on DAT iyo is aqbalo dugsi ilkaha oo aad doorato.
Haddii aad mar uun loo arkaa xirfad in ilkaha, ama hadda ku jira arday pre-ilkaha, markaas website this dhab waa waxa aad u baahan tahay in aad qaadato tallaabada xigta. Waxaan la aad oo dhan Talooyin iyo tabaha aan ka waayo-aragnimada qof ahaaneed aan ka bartay wadaagi doona iyo sidoo kale kaa caawin in aad si fiican iyada oo aan jadwalka 8-todobaad waxbarasho baran.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan DAT ah, ama haddii aad rabto inaad adigu soo bandhigto oo waxaad ku tidhaahdaa hi, fadlan ii soo diri email ah. Website-kani waxaa idiin abuuray, sidaa darteed ha ka xishoon, Waxaan jeclaan lahaa inaan caawiyo.